Command tree: လမ်းညွှန်များကို Linux ပေါ်မှပင်ပြရန်။ | Linux မှ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် console မှ Linux လမ်းညွှန်များကိုသွားခြင်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ထို့အပြင်အချို့ကိစ္စများတွင်အချို့သော directory များဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်သဘာဝနည်းလမ်းမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ပုံစံဖြင့်လမ်းညွှန်များကိုပြခြင်းဖြစ်သည်။
လမ်းညွှန်ချက်များအား Linux တွင်သစ်ပင်တစ်ပင်အဖြစ်ပြသခြင်းသည်လွယ်ကူပြီး၊ သစ်ပင်၎င်းသည် Linux ဖြန့်ချိမှုအများစုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသော်လည်းတရားဝင် repositories တွင်တွေ့နိုင်သည်။
သစ်ပင် -shaped လမ်းညွှန်များ
1 သစ်ပင် command ကိုကဘာလဲ?
2 Linux ပေါ်ရှိ tree command ကို install လုပ်ခြင်း
3 သစ်ပင် command ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
သစ်ပင် command ကိုကဘာလဲ?
၎င်းသည် Linux အသုံးပြုသူများကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော command တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ operating system ၏လမ်းညွှန်များ၏အဆင့်ဆင့်ကို graphical နှင့်စနစ်တကျဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။
tree command သည်ပြင်ပကိရိယာများ၏လမ်းညွှန်များကိုစာရင်းပြုရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။
Linux ပေါ်ရှိ tree command ကို install လုပ်ခြင်း
အချို့သောဖြန့်ကျက်မှုများတွင် tree command ကိုမူလအတိုင်းတပ်ဆင်ထားသော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့် distro တစ်ခုချင်းစီ၏ repositories ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို install လုပ်ရန်လုံလောက်သည်။
သင်အကြိုက်ဆုံး distro ၌ထည့်သွင်းရန်အောက်ပါ command တစ်ခုခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
$yum သစ်ပင် -y install လုပ်ပါ #Centos y Fedora
Tree command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် installation ကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်
သစ်ပင် command ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
Tree command ၏အားသာချက်များအားလုံးကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ terminal မှလုပ်ဆောင်ရန် command ၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် $ man tree
ထိုနည်းတူစွာပင်အောက်တွင်သင့်အားစာရင်းတစ်ခု ပေး၍ ဤ command ၏အသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ -
ဤ command ၏ parameters များကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။သူတို့သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ဖိုင်များအပါအဝင်အားလုံးဖိုင်များ၏စာရင်းပြသပါ«, ဒီအဘို့ငါတို့ execute tree -af
ဒီရိုးရှင်းသော်လည်းအသုံး ၀ င်သော command မှသင်အမြင့်ဆုံးရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Command tree: Directory များကို Linux တွင်ပြသခြင်း
အလွန်ကောင်းသောနှင့်တိကျဆောင်းပါး Lizard ကို။ ယောက်ျားတွေကကျွန်တော့်ကို Windows application တစ်ခုထပ်တူလုပ်ပေးတာလို့ပြောတိုင်းသစ်ပင်ပညတ်ကိုငါသင်ပေးမယ်။ သူတို့ထဲမှအနည်းငယ်က MS-DOS command dir / s နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုသိကြသည်။
ငါ command ကို windows နှင့်အမှန်တရားများမှတစ်ဆင့်သိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းသည်မှာ Linux သည်၎င်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ချိန်ကထည့်သွင်းလိုက်သောအခါအလွန်အဆင်ပြေသည်။
အရမ်းကောင်းတယ် !!၊ ငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်၊ ရက်ပေါင်းများစွာနောက်ဆုံးအထိရှာဖွေခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!
Taty Aguilar ထံပြန်သွားပါ
တောက်ပ !! ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့, အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။